Burcad badeed laga iibshay Visayaal loogu tala galay shaqaalaha Dowladda oo Holland yimid.
Topnews:-Burcad badeed laga iibshay Visayaal loogu tala galay shaqaalaha Dowladda oo Holland yimid.
29 June 2013 Waagacusub.com-Dhalinyaro ka tirsan burcad badeeda Somalia ayaa markii ugu horeeysay shir uga qeybgalayo dalka Holland kadib markii qaar ka mida Madaxda Somalia ka iibsadeen Visayaal loogu tala galay shaqaalaha Dowladda.
Burcad badeedaan Reer Puntland oo Muqdisho loogu sameeyay baasaboorada loo yaqaan Service Passport waxaa ku jira hogaamiye ka tirsan burcad badeeda oo lagu magacaabo Ahmed Xayir Ibrahim lana dhashay Xildhibaan Mohamud Xayir Ibrahim oo ka mida Mudanayaasha Baarlamaanka Federalka Somalia.
Nin ka mida burcad badeeda soo gashay Holland ayaa eheladiisa u sheegay inuu Visaha ka iibsaday Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Dowladda Federalka somalia Mr Abdishakuur Ali Mire oo loo yaqaan GAAL ERI.
Sarkaalka ugu weyn burcad badeeda reer Puntland ee shirka shaqaalaha Dowladda Somalia uga qeybgalayo Holland waxaa laga soo xigtay inuu iska dhiibayo Yurub ,kuna laaban doonin Somalia.
"Visaha waxaan ku soo qaatay lacag la''aan,waxaa i siiyay walaalkeey Mohamud Ibrahim,dhowr habeen ayaan Muqdisho joogay,waxaan sugaayay baasaboorka shaqaalaha Dowladda kumana laaban doono Somalia" ayuu yiri Sarkaalka burcad badeeda oo la hadlayay dad u dhashay qabiilkiisa Majeerteen gaar ahaan Cali Saleebaan.
Ila wareedyo muhiima ayaa Waagacusub u sheegay inay Holland ku soo wajahan yihiin dhalinyaro cusub oo Burcad badeeda kuwaas oo doonaya inay nolol cusub ka bilaabaan Yurub maadama afduubyadii burcad badeeda dhamaadeen.